Nikon Coolpix L840 डिजिटल क्यामेराले L830 लाई प्रतिस्थापित गर्यो। र यदि उनको उपस्थिति धेरै फरक छैन भने, नवीनताका विशेषताहरू केही सुधारिएका छन्। यो एक छद्म ऑप्टिकल जूम र एक किफायती मूल्य संग एक छद्म आईने क्यामेरा हो। Nikon L840 कसलाई कसले बढाउन सक्छ? पेशेवरहरु र amateurs को विस्तृत, विस्तृत विशेषताहरु, पेशेवरहरु र मोडेल को विप - सबै यो तपाईं हाम्रो समीक्षा मा पाउनेछ।
रूप र उपयोगिता
निर्माताको रेखामा Nikon Coolpix L840 कम्प्याक्ट क्यामेराले पारंपरिक डिजिटल र एसएलआर क्यामेराबीच एक मध्यवर्ती स्थितिमा राख्छ। उत्तीर्ण संग, उनको एक असाधारण समान समानता छ, र पूर्व देखि उनले प्रयोग को सादगी को अपनाए।
यहाँको क्यामेराको मुख्य बटन यस्तो क्यामेरा छ, जस्तै डिजिटल क्यामेराहरू छन्, र यसको ठूलो शरीर आराममा फिट हुन्छ। रबाइज्ड पैडहरू पर्ची हटाउँछन्, र शटर बटन र म्याग्निङको लागि पहिया सजिलैले अनुक्रमणिका औंला भित्र पस्छ।
विभिन्न कोणमा शूटिंग कुनै पनि असुविधाको कारणले गर्दा 3-इन्च स्क्रिन90 डिग्री माथि वा 85 डिग्री तल छानिएको छ। यसमा 921 हजार पिक्सलहरूको उच्च रिजोल्युसन छ - र धेरै राम्रो दृश्य कोणहरू, जुन सही रंग रेजिडिशनको गुणवत्ता र छविको जोखिम निर्धारण गर्नेछ।
मामला को तल मा एक तपस्या गर्तिका र एक साधारण कवर जो बैटरी र मेमोरी कार्ड को उपयोग को खोलता छ।
विभिन्न शूटिंग परिदृश्यको साथ एक परिचित पहल हराइरहेको छ, त्यसैले तिनीहरूलाई पहुँच गर्न तपाइँ प्रदर्शनको दायाँतिर दृश्य बटनमा क्लिक गर्नु हुन्छ। तपाईं पूर्वनिर्धारित मोडहरू, स्वत: मोड र 18 अन्य परिदृश्यहरू, प्यानोमामा मोड सहित छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
यो बटनले9इलेक्ट्रनिक फिल्टरहरूको पहुँच पनि दिन्छ।
स्वत: मोड डिजिटल क्यामेराहरूमा धेरै समान छ। प्रयोगकर्ताले सेतो सन्तुलन समायोजन गर्न सक्छ , आईएसओ मान र मेनु बटन प्रयोग गरी फोकस गर्न को लागी बिन्दु चयन गर्नुहोस्।
मेनुमा तपाईँले निरन्तर शूटिंग मोड पनि फ्रेम फ्रेम र यसको गुणस्तर समायोजन गर्नुहुनेछ।
तर एक्सपोजर मुआवजा (एक्सपोजर मुआवजा) सेटिङ नियन्त्रण गर्न चयनकर्ताको दायाँमा बटन छ। यसको मूल्य +/-2ईभरमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ (यो Nikon L840 क्यामेरा बन्द गर्ने पछि फर्केर फर्कन्छ)।
बायाँ चयनकर्ता यो प्रयोग गरिन्छ:
माथिल्लो फ्लैश नियन्त्रण;
ढिलाइ शूटिङको लागि बायाँ तिर टाइमर हो;
तल्लो - म्याक्रो फोकस (स्वतः मोडमा)।
फ्लैश आफैले बटन को प्रयोग गरेर म्यानुअल रूपमा खोल्न आवश्यक छ, जुन बायाँ हातको औँला मुनि मात्र हो। यो एकदम ठिक छ, किनकी तपाइँ निश्चित हुन सक्नुहुनेछ कि यसले गलत समयमा काम गर्दैन।
आफैं लेन्समा ढिलो जूमिंगको लागि एक लीभर छ। अर्को फोन्च लम्बाइसँग काम गर्दा फ्रेमिङ सेटिङको लागि बटन हो।
Nikon L840 लाई ढिलो गर्न सकिदैन। यसले 1.4 सेकेन्डमा तस्बिर खिच्दछ र लिन्छ, चाँडो राम्रो प्रकाश मा फोकस गर्दछ। जूमिंग र अँध्यारो परिस्थितिमा शूटिंग गर्दा क्यामेराले एकदम कम गर्छ, तर सामान्यतया चाँडै काम गर्दछ। केही तथ्याङ्कहरू:
शटर गति - 1/1500 - 1 सेकेन्ड, "आतिशबाजी" मोडमा अन्धकारमा शूटिंगको लागि4सेकेण्ड सम्म;
तस्विरको अधिकतम रिजोल्युशन 4608 x 3456 (7 एमबीको फाइल आकार);
म्याट्रिक्सको संवेदनशीलता 16 लाख रंग हो;
दायरा ISO - 125-1600, स्वत: मोडमा - 6400 सम्मसम्म;
लेंस - NIKKOR,9समूहहरुमा 12 तत्व;
लेंस को फोकल लम्बाई - 4.0-152 मिमी;
जूम - ओप्टिकल 38-गुना, डिजिटल - 4-गुना, गतिशील ठीक जुम 76-गुना।
यहाँ के मूल Nikon L840 मा समावेश छ: निर्देशन,4ब्याटरी (अल्केलेन), एक लेन्स टोपी, एक USB केबल, एक क्यान्सर पट्टा र क्यामेरा आफै।
पावर आपूर्ति पोर्टेबल टेक्नोलोजीको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पहल हो। Nikon Coolpix L8404एए ब्याटर द्वारा संचालित छ। यो सुविधामा यसको प्रविधि र विपक्ष छ। जाहिर छ, एक हराएको वा क्षतिग्रस्त ब्याट्री प्रतिस्थापन भन्दा ब्याट्रीहरू आकस्मिक अवस्थामा फेला पार्न सजिलो छ, वा फिल्डको अवस्थामा शुल्क लगाउँदछ। तर तिनीहरूको मूल्य उनीहरूको गुणस्तरमा निर्भर गर्दछ र तपाईका तस्वीरहरू संख्यामा निर्भर गर्दछ, र अन्ततः तिनीहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्नो विशेषताहरू गुमाउनेछन्। त्यसैले, महंगा निकल-धातु हाइड्राइड ब्याट्री लामो हुनेछ, र पूर्ण शुल्कको साथ तिनीहरूले लगभग 540 शटहरू र स्याउटो एल्किलिन ब्याटरहरू (क्यामेराको साथ आउँछन्) -590शटमा।
साथै, ब्याट्री डिब्बाको डिजाइन राम्रो तरिकाले सोचेको छैन, किनकि जब खोले मात्र यो तल मा सुत्न सक्छ।
यो सुविधा L830 मा उपलब्ध थिएन र Nikon Coolpix L840 को फाईदाहरु मध्ये एक थियो। यस बटनमा क्लिक गर्नु पछि तपाईंले सजिलै संग स्मार्टफोन वा ट्याब्लेटसँग जडान गर्न सक्नुहुन्छ र क्यामेरा नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्नुहुने बटन (वाइफाइ खोल्न अनुमति दिन्छ बटन माथि शीर्षमा छ) (तपाइँ पहिले नै तपाइँको मोबाइल उपकरणमा Nikon Wireless Mobile Utility स्थापना गर्न आवश्यक छ)।
आदेशहरूमा क्यामेराको प्रतिक्रियाको गति निकै उच्च छ, किनकि दूरी सम्भव छ जसको दूरी हो (10 मिटर सम्म)। यन्त्रहरू बीच चित्रहरू आदान प्रदान गर्न एनएफसी संचार प्रोटोकल पनि उपयोगी छ।
तस्बिरहरू र भिडियोहरूको गुणस्तर
एक एसएलआर क्यामेराको रूपमा यस्तै शूटिंग परिणामको उत्पादन गर्न Nikon L840 को आशा नगर्नुहोला। यसको म्याट्रिक्स कम्पैक्ट डिजिटल क्यामराहरूमा स्थापित भएको के समान छ, तर यो भन्न सकिँदैन कि यसले राम्रोसँग काम गर्दैन।
राम्रो दिनको साथ लिइएको तस्वीरहरू उच्च गुणस्तर र अनुकूलतम प्रदर्शनको हुन्छन् यदि साधारण आकारमा देखिएका हुन्छन्। तथापि, एक बलियो वृद्धिको साथ, सेन्सरको मामूली क्षमताओंले आफैंलाई महसुस गर्यो: वस्तुको किनारामा बलियो भित्ता र धमिलो छ।
यो सुविधा अझ स्पष्ट छ जब टाढाको विषयहरू शूट गर्दा वा जूम प्रयोग गर्दा। क्यामेराले म्याट्रिक्सको संवेदनशीलता को मामला मा झटका को लागी क्षतिपूर्ति गर्न को लागी प्रयास गर्दछ र यसैले केवल धब्बा को डिग्री बढ्छ।
गरीब प्रकाश मा शूटिंग शोर कम गर्न को लागी प्रौद्योगिकी को उपलब्धता को बावजूद धेरै शोर को साबित गर्दछ। उल्लेखनीय अनाज पहिले देखि नै आईएसओ 800 मा स्पष्ट छ, र यसको अधिकतम अधिकतम 6400 बढि लाभ मार्फत एक विपणन पालो को लागी छ, किनकि तस्बिरहरु पनि संतृप्त, अन्न र फजी हो।
तर कंपन दमन प्रणाली वर्णनमा एक सुन्दर रेखा होइन। लेंस को एक फोकल लम्बाई को लागि , यो बस आवश्यक छ र नाटकीय रूप देखि फोटो को गुणवत्ता मा सुधार गर्दछ।
क्यामेराले म्याक्रो शूटिङसँग राम्ररी प्रतिलिपि गर्दछ (वस्तुमा न्यूनतम दूरी 1 सेन्टिमिटर) र रातको शूटिंग। पछिको लागि त्यहाँ दुई अतिरिक्त सेटिङहरू - म्यानुअल मोड र तिपाई।
भिडियो शूटिंग गर्न को लागी केहि सानो हो, तर अझै पनि परिणाम धेरै राम्रो छ। क्यामेराले यसलाई स्टेरियो ध्वनि रेकर्डिङको साथ पूर्ण HD (1920x1080 पिक्सेल) को रूपमा गोली लिन सक्छ। ओप्टिकल जूम, साथ साथै ओप्टिकल छवि स्थिरता, "भिडियो" मोडको प्रयोगमा पनि उपलब्ध छन्।
मेनुसँग एक रोचक विकल्प लघु मूवी शो छ, जसले स्वचालित भिडियो क्लिपहरू 30 सेकेन्ड फिल्ममा संयोजन गर्छ, पृष्ठभूमि संगीत र सरल विशेष प्रभाव सेट गर्न क्षमताको साथ।
स्मार्ट पोर्ट्रेट एउटा प्रकार्य हो जुन तपाईं दृश्य बटनको साथ खोल्न सक्नुहुनेछ। "स्मार्ट चित्र" ले तपाईंलाई स्वचालित रूपमा छाला टोन र मुखौटा स्पष्ट कमजोरीहरूको स्तर निर्धारण गर्न दिन्छ, यसको विपरीत र रंग संतृप्तिमा नरम पार्दछ। प्रत्येक प्यारामिटरको तीव्रता कम / बढ्न सक्छ र एक उचित दृष्टिकोण संग, तिनीहरूले एक राम्रो प्रभाव पार्छन्। तर यो राम्रो छैन कि यी सेटिङहरू दुर्व्यवहार गर्ने, अन्यथा शूटिंगको परिणाम अप्ठ्यारो हुनेछ।
यदि तपाइँ पहिले नै गोली चिन्ह फ्रेममा यस्तो सुधारहरू लागू गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंलाई ग्यालरीमा चयन गर्न र मेनु बटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि ग्यामर रिटाउभ प्रकार्यलाई स्क्रोल गर्नुहोस्, जहाँ त्यहाँ थप विकल्पहरू छन्: चिन्ता घटाउँदै वा आँखाको आकार बढाउँछन्, छालाको, रातो आँखा र आँखाहरूमा थोरै चिसो चमक हटाउँदछ, तपाइँले आफ्नो होंठ, गाल र आँखाहरू पनि "टन्ट" गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईंको मोडले सीधा क्यामेरामा हेर्दै छ भने, र अनुहारले लगभग चित्रको सम्पूर्ण स्पेस भर्दछ, यो कार्यक्रमले स्वचालित रूपमा अनुहार सुविधाहरूमा विभाजित गर्दछ र धेरै उपयोगी परिवर्तन गर्दछ। कुनै पनि अवस्थामा, यो प्रकार्यको मद्दतले तपाईं सजिलै संग मजा गर्न सक्नुहुनेछ।
क्यामेरा Nikon L840 ले खरिदको मूल्यमा कति कडा गर्छ? यसको लागि मूल्य 13-13.5 हजार रूबल बीच भिन्न हुन्छ। यो एक लोकप्रिय र अपेक्षाकृत नयाँ मोडेल हो, त्यसैले यो यसलाई इन्टरनेट र साधारण पसलमा दुवै सजिलो छ। तदनुसार, सामानहरूको लागि थप अनुकूलन मूल्य वा छूटको खोजी गर्न पनि सम्भव छ। न्यूनतममा, तपाईं मेमोरी कार्डको आवश्यकता पर्दछ (एसडी कार्डको लागि 32 जीबीको क्षमताको साथ लगभग 1.5 हजार रूबल) र एक ब्याट्रि चार्जर (400 रुबल वा लगभग 1,5 हजार रूबलबाट4ब्याट्रीको सेट र यसको यन्त्र )।
ग्राहकहरूले कम्पाक्सन Nikon Coolpix L840 को बारेमा के भन्नुहुन्छ?
समीक्षाहरू यस मोडेलको बारेमा प्रायः सकारात्मक छन्। यो प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ र स्वतः ट्यागको साथ पनि राम्रो नतिजा दिन्छ।
तथापि, धेरै प्रयोगकर्ताहरूले उल्लेख गरे कि खराब प्रकाश एक चुनौती हो जसले निकोन L840 लाई सधैं संभाल गर्दैन। समीक्षाहरू भन्न सकिन्छ कि स्थिति फ्लैश द्वारा छोटो छोटो छ, तर यसलाई सधैं प्रयोग गर्न सजिलो छैन र यो दृढताले अन्तिम परिणामलाई प्रभाव पार्छ।
ब्याटरीहरूको प्रयोगको लागि, राय विभाजन गरिएको छ: कसैले यसलाई धेरै सजिलो पाउँछ, र कसैले समावेश गरेको ब्याट्रीलाई प्राथमिकता दिन्छ। यसैले यहाँ राम्रो छ कि तपाईका प्राथमिकताहरू र लक्ष्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न को लागी तपाईंले क्यामेरा किन्नु भएको छ। यदि तपाइँ पक्का हुनुहुन्छ कि तपाइँ सधैँ यसको पछि लागी एक आउटलेट पत्ता लगाउनुहुनेछ, त्यसपछि यो ब्याट्रिको साथमा एक मोडेल किन्नका लागि अधिक लाभदायक छ, र यदि तपाइँ धेरै यात्रा गर्नुहुन्छ, ब्याकप्याकमा ब्याट्री प्याकेजले तपाइँको क्यामेराको दक्षतालाई ग्यारेन्टी दिनेछ।
पेशेवरहरु को राय
फोटोटेक्निक्समा थप परिष्कृत विशेषज्ञहरू पहिलो नजरमा अन्य, कम स्पष्ट भेट्टाउँछन्, कमजोरीहरू।
पहिलो, आयामहरू। क्यामेरासँग विशेषताहरू जुन पारंपरिक डिजिटल क्यामेराहरूसँग नजिक छन्, जसको लागि एक 68x जूम सम्भव छ, तर Nikon L840 को स्थितिमा तपाईले केवल 0.5 किलोग्राम भन्दा बढि क्यामेरा बरु ठूलो क्यामेरा लिन्छ, जुन धेरै सजिलो छैन।
दोस्रो, मूल्य र प्रतियोगिता। बजारमा तपाईं सजिलैसँग समान विशेषताहरूसँग मोडेलहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ, सस्ता वा सस्तो लागतको साथ, तर ठूलो जुम र टचस्क्रिनको साथ।
Nikon L840 - यो एक अत्यन्त योग्य विश्वव्यापी क्यामेरा हो, जुन उपयोग को आसानी र छवियों को उच्च गुण (यदि उनको बढावा छैन र trivialities मा कार्पोरेशन छैन) को संयोजन गर्दछ। यसले छिटो फोकस गर्छ, राम्रो रङ प्रतिपादन र एक्सपोजर प्रदान गर्छ। एक रोटरी स्क्रीन को रूप मा सुखद वृद्धि, 38x जूम र वाई-फाई केवल यसको प्रयोग को अनुभव को बेहतर बनािन्छ।
तर, प्रतियोगिहरुबाट मोडेलको मूल्य, साइज र समान संकेतकहरू दिएका छन्, हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं: यसले यसको आकर्षणलाई कम पार्छ। त्यसैले, एक स्पष्ट निर्णय गर्न गाह्रो छ - खरीद गर्न वा खरीद गर्न नराम्रो। Nikon L840 को बारेमा तपाईंले केहि पनि खराब भन्नुहुँदैन, तर यो नजिकको परीक्षामा राम्रो छैन।
KVN टोली "Kamyzyak"। खेलाडीहरू को संरचना
नोव्यू झूमर छत - आफ्नो घर उच्च शैली
Lactation कसरी कम गर्न: को उपयुक्त तरिका चयन गर्नुहोस्
रोचक विचार: एक पुरुष सहकर्मी जन्मदिन दिन के
उहाँले - तुला, त्यो - तुला। अनुकूलता गठबंधन र समझ